Baarlamaanka Britain oo oggollaaday xeerka ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub(Brexit) - Horn Future
Baarlamaanka Britain oo oggollaaday xeerka ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub(Brexit)
London (Horn Future)-Baarlamaanka Britain ayaa oggollaaday xeerka ka bixitaanka Midowga Yurub (EU) ee ay soo gudbisay xukuumadda raysal wasaare Teressa May, kaas oo soo gabogabaynaya ka sareeynta xeerka Yurub ee kan Britain, oo ah tallaabadii ugu horaysay ee xeer-dejinta ee ah hawlaha ka bixitaanka Midowga Yurub.
Kadib dood socotay muddo saacado ah qaadatay, ayaa 326 xildhibaano ay taageereen qoraalka go’aanka ka bixitaanka ee ka soo baxay xayn-daabka Yurub, halka ay ka soo horjeesteen 290 xildhibaano ah.
Theressa May oo war qoraal ah soo saartay go’aankan baarlamaanka kadib ayaa waxa ku tidhi “Waxa dhab ahaan uu qaatay go’aan taariikhi ah oo lagu taageerayo rabitaanka dadka British ka ah,waxana uu u codeeyay xeer u dammaanad qaadaya dhabta iyo in la cadeeyo ka hor inta aanan ka bixin Midowga Yurub,”.
Dhinaciisa, xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa muujiyay diidmadiisa xeerkan sababtoo ah qodobadiisa oggolaanaya in xeerarka EU-da loo badilo xeerarka British –ka ah taas oo ka dhigan ballaadhin aanan la aqbali karin ee awooda fulinta.
xeerkan xambaarsan magaca “Exit from the European Union”,ayaa looga golleeyahay inuu waxba kama jiraan ka dhigo xeerkii sanadkii 1972, oo Britain ay ku biirtay Midawga Yurub,waxana sido kale loogu talagalay in lagu baddilo 12,000 oo xeerarka Yurub ah oo imika la dhaqan galiyo kuwaas oo lagu badili doono xeerarka Britain sida ay yihiin ama wax laga baddili doono.
« Number of latest Rohingya refugees climbs to 370,000	» UNICEF oo sheegtay in dhalinyaro badan oo qaxooti ah ay la kulmaan in laga faa’iidaysto